इरानको समर्थनमा चिन,रसियाले दियो साथ, युद्द हुने संकेत देखेपछि सबैकाम छोडेर जापानका प्रधानमन्त्री जान लागे मध्य पूर्व ! - Nepal Insider
January 7, 2020 864
जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबे अर्को हप्ता मध्य पूर्वको भ्रमणमा जानुहुने भएको छ । उहाँले अमेरिकी हवाई आ क्रमणमा परी इरानी सैन्य कमाण्डर मा रिएपछि उत्पन्न तनाव न्युनिकरणका लागि साउदी अरब, ओमन र युएईको भ्रमण गर्नुहुने भएको हो ।
प्रधानमन्त्रीको पार्टी लिवरल डेमोक्र्याटिक पार्टीका एक जना प्रवक्ताले आबे यही जनवरी १२ देखि जनवरी १५सम्म मध्यपूर्वको भ्रमणमा जाने बताएका हुन् ।
उहाँले भन्नुभयो, “त्यस क्षेत्रमा शान्ति स्थापनाका लागि र स्थायित्वका लागि मैले कुटनीतिक पहलमार्फत् केही योगदान दिन सक्छु भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।”
वासिङ्टन र तेहरानबीचको सम्वन्ध सुधार्नका लागि मध्यस्तकर्ताको रुपमा प्रयास गरिरहनु भएका आबेले ‘गहिरो चिन्ता’ व्यक्त गर्दै आउनु भएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र तेहरानका सर्वोच्च नेता आयोतुल्लाह अलि खामेनीले एक अर्कालाई कडा चुनौती दिएपछि थप नराम्रो अवस्था सृजना हुनसक्ने आशंका गरिएको छ ।
इरानी सैन्य क’मा’ण्डर कासिम सुलेमानीको गत शुक्रबार बग्दाद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलनजिकै भएको अमेरिकी ड्रोन हमलामा निधन भएको थियो ।
Prevहेमा र छाया बिच अन्तर्वार्तामै कुटाकुट ( भिडियो हेर्नुहोस् )
Nextरनाजना मैनालीले लेखे ससुरोलाई लामो स्टाटस !
खुशीको खबर ! आज १ हजारले घट्यो सुनको मूल्य, चाँदीको पनि मूल्य घट्यो
गणेश भगवानको दर्शन गरी भेटि स्वरूप एक शेयर गर्दै भोलि फाल्गुन १३ गते मंगलबारको राशिफल पढ्नुस ! हर मनोकामना पूर्ण हुनेछ
अभिनेत्री गौरी मल्लको आज जन्मदिन